I-FAQs -I-Tianjin i-TheOne Metal Products Co, Ltd.
Okokuqala, khetha umthengisi wezinto ezilungileyo kakhulu
Okwesibini, yandisa amandla emveliso, ukunciphisa iindleko zokuvelisa,
Okwesithathu, inkqubo yokudibanisa edibeneyo, yehlisa iindleko zabasebenzi.
Ukuphuma, Musa ukuchitha indawo yokupakisha, unciphise iindleko zokuhambisa.
Ewe sinako ukubonelela ngamaxwebhu amaninzi kubandakanya iZatifikethi zeMpahla, Ingxelo yoVavanyo lweMveliso, kunye namaxwebhu abonisa ukulungiswa kwesiko.
Kwiisampulu, ixesha elikhokelayo limalunga neentsuku ezi-2-7. Kwimveliso yobuninzi, ixesha elikhokelayo ziintsuku ezingama-20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo asebenza xa (1) siyifumene idiphozithi yakho, kwaye (2) sinemvume yakho yokugqibela yeemveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu okuhola awasebenzi kunye nomhla wakho wokugqibela, nceda ugqithise iimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.
Unokwenza intlawulo kwi-akhawunti yethu yebhanki, kwi-Western Union, T / T, L / C ngokubona njalo njalo.
I-30% yediphozithi kwangaphambili, i-70% ibhalansi ngaphambi kokuhanjiswa
Luluphi uhlobo lomgangatho wolawulo?
1.Ngaphambi kwemveliso, sijonga zonke izinto ezibonakalayo kunye neekhemikhali nezomzimba
Kwinkqubo yemveliso, i-QC yethu ijongisisa ngexesha kunye nokujonga indawo.
3.Umveliso ogqityiweyo, siya kujonga imbonakalo, ububanzi bebhendi * ubukhulu, simahla kunye nomthwalo wetrque njalo njalo
4.Ngaphambi kokuziswa, siya kuthatha iifoto zeempahla, emva koko yonke inkqubo yokuhlola iya kugcinwa kwifayile kwaye yenze ingxelo yokuhlola.
Ukupakisha kwethu okuqhelekileyo yingxowa yeplasitiki engaphakathi kunye nebhokisi yangaphandle ethengisa izinto ngepallet.Izokuthintela iimpahla ukuba zingabi manzi kunye neebhokisi ukuba zingonakaliswa .Ukuba unazo ezinye iimfuno, unxibelelana nathi ngepls, siya kuzama ukukufezekisa.
Iindleko zokuhambisa zixhomekeke kwindlela oyikhethayo yokufumana iimpahla. Ukuthetha ngesiqhelo yeyona ndlela ikhawulezayo kodwa kunye neyona ndlela ibiza kakhulu. Ngokujonga elwandle sesona sisombululo silungileyo samaxabiso amakhulu. Amanqanaba eempahla ngqo esinokukunika zona ukuba sazi iinkcukacha zenani, ubunzima kunye nendlela. Nceda unxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya.